Kedu ihe ị kwesịrị ịma banyere njikọ ụgwọ?
Ọ bụrụ na onye ọ bụla jụrụ m ihe bụ akụkụ kachasị mkpa nke njikarịcha search engine bụ, M ga-aza na ọ bụ doro anya backlinks. N'agbanyeghi otu esi enweta ha. Ihe ha kwesiri ịbụ ma karia, nke ka mma. Ekwenyela onye ọ bụla kwuru na ụlọ njikọ ahụ anwụọla. Nkwupụta ọjọọ a na-agbasa site na webmasters na-enweghị mmasị na ndị na-enweghị ahụmahụ bụ ndị engines na-achọpụta na nso nso a.
Ọ bụrụ na isi ụlọ ọrụ ịntanetị gị bụ ịmanye ndị ọzọ ịzụ ahịa okporo ụzọ na ibe weebụ gị, mgbe ahụ ịkwesịrị ilekwasị anya na ịmepụta redio azụ. N'isiokwu a, anyị ga-atụle otú e si azụlinklinks niche na nzube iji dọta ndị na-eduga na saịtị gị.
Ọrụ nke backlinks na mgbasa ozi n'ịntanetị
Nchọgharị ọchụchọ dị ka Google na-akọwa ikike na saịtị gị site na ọnụ ọgụgụ na àgwà nke backlinks na-abịakwute gị saịtị sitere na isi mmalite weebụ. A na-akpọ njikọ ndị na-abata na saịtị gị inbound ma ọ bụ n'ime njikọ. Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ nwere ọtụtụ njikọ site na ebe nrụọrụ weebụ PR9 ma ọ bụ 10 dị elu, mgbe ahụ, ọ ga-abụkarị n'usoro na TOP nke nsonaazụ ọchụchọ.
Ọ bụrụ na ị ka na-eche banyere ọrụ azụlinks na mgbasa ozi azụmahịa gị n'ịntanetị, ka m kọọrọ gị ụfọdụ uru bara uru nke njikọta njikọ ụlọ:
Ntọala njikwa search engine
Ọ bụrụ na njikọ weebụsaịtị gị ma ọ bụ mgbasa ozi n'ịntanetị jikọtara gị na ebe nrụọrụ weebụ dị elu, Google ga-adọta ya dị ka ikike karie ma nye ya ọkwa dị elu na saịtị nchọta ọchụchọ.
Ọnụ ọgụgụ na-arị elu
Ọ bụrụ na ị nwere saịtị na saịtị gị, Google ga-edepụta ọdịnaya ọhụrụ ọ bụla ị bipụtara.Otú ọ dị, ndị ọrụ crawlers ga-agbazi saịtị gị ugboro ugboro ma ọ bụrụ na ha achọta ọ bụla azụlinks nke na-ezo aka na ya. Ka ị na-enweta ihe azụlinks ị ga - enweta, ọ ga - aka mma ka ọ bụrụ na ị na - ahụ maka ebe ị na -.
okporo ụzọ na-ezipụ
Backlinks dị mma nwere ike iwetara ọtụtụ ụzọ ntinye aka na saịtị gị.Usoro okporo ụzọ a nwekwara ike imetụta saịtị PageRank gị ma bulie ikike ngalaba gị. Ọzọkwa, okporo ụzọ ntinye aka na-emekarị ka ọ ghọọ ahịa.
Ịkwesiri ịzụta ndenye azụ niche?
Ịzụ azụ azụ bụ ụzọ kachasị ngwa iji nweta ha. Otú ọ dị, ọ dị gị mkpa iji usoro a mara mma. Ị kwesịrị ịma na site na ịzụta njikọ, ị na-emerụ ntụziaka Google webmaster. Ya mere, oburu na i nweghi ihe omuma iji zoo ihe ndi backlinks, o yikariri ka ichota gi dika nchikota onu ozo, ida ndi ozo,.
Dị ka omume na-egosi, ihe ize ndụ ahụ dị oke elu mgbe ị zụtara njikọ na ala dị ala, dị ka $ 5 kwa njikọ. N'ọtụtụ ọnọdụ, ọnụ ala dị otú ahụ na-ekwu banyere ịdị ala dị ala nke ebe nrụọrụ weebụ nke na-enye ya maka gị. A na-eji ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ spam ndị dị otú ahụ kee nanị otu nzube ịzụta ma ree njikọ njikọ. Google nwere ike ịchọpụta saịtị ndị dị otú ahụ ma kpee ha ikpe, ma a ga-akwụ gị ụgwọ maka ha Source .